Bacela uxhaso abanakekela abahlwempu | News24
Bacela uxhaso abanakekela abahlwempu
isithombe: nosipho mkhizeUNks Nosindiswa Mgobozi oyilungu le nhlangano unxusa umphakathi uyilekelele.
AMALUNGU enhlangano elekelela umphakathi nabantwana abantulayo eyaziwa ngokuthi yi-Enhlanhleni Isibani Sezwe anxusa umphakathi osomabhizinisi, amabandla ahlukene ukuba abaxhase njengoba ishodelwa ukudla enikela ngakho emphakathini.
Umsunguli wenhlangano, uMfu Ntshangase, uthe le nhlangano ilekelela abantu abagaphezu kwama-80 njengoba ivamise ukubaphekela ukudla kathathu ngesonto.
Uthe: “Inani labantu esibapha ukudla liyanda usuku nosuku. lokhu sikubona ngoba sesize sishodelwe amapleti nezipuni uma sibaphakela.
“Sidinga kakhulu isitofu segesi, ukudla, amapleti nezipuni. Sizama konke okusemandleni ukukhulisa isikhwama semali njengoba senza izinhlelo zokudayisa izingubo esiziphiwe amalungu omphakathi kodwa imali esiyitholayo ayeneli.
“Sigxile kakhulu ekulekeleleni izingane ngoba iningi lazo zilala zilambile emakhaya. Siyaqikelela ukuthi izingane ziza ehhovisi lethu uma seziphuma esikoleni ukuze sikwazi ukubanika ukudla ngaphambi kokubasiza ngomsebenzi wesikole,” kusho uMfu Ntshangase.
Inhlangano igxile kakhulu ekusizeni izintandane nabantwana abahlukumezeke ngezindlela ezahlukene emphakathini.
Le nhlangano yasungulwa ngo-2002 emva kokuba uMfu Ntshangase ebone iningi le zingane eziyizi ntandane emphakathini.
Uthe: “Inhlangano yaqala ngamalungu kaSontoskole ngo-2002, kodwa yakhula eminyakeni edlule ngemva kokubona ukuthi iningi lo mphakathi wethu uhlala ngaphansi kwezimo ezimbi.
“Sondla izingane ezingu-126 kodwa kwesinye isikhathi kugcine sekufika nabanye emphakathini sigcine sesisiza abantu abangaphezu kuka-1 000, kubandakanya izingane nabantu abadala.
“Kwesinye isikhathi ezinye izingane azinaso isitifiketi zokuzalwa noma isibonelelo sika hulumeni, ngakho-ke sisebenzisana neminyango kahulumeni eyehlukene ukuze le zingane zibhaliselwe esikoleni bese zithola nemali yesibonelelo sika hulumeni,” kusho yena.
Iningi la labantwana baphila nesifo sesandulela ngculazi ngakho-ke ama volontiya ale nhlahlano ayazifundisa izingane ngalesi sifo.
“Sinama volontiya afundisa ngalesi sifo nokuthi kungani kumele zidle imishwanguzo yama-ARV.
“Abanye babo babengazi ukuthi banalesi sifo ngoba imindeni yabo yayesaba ukubatshela.
“Intsha eningi emphakathini ihlala nogogo nomkhulu bayo, futhi ivame ukusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni.
“Lentsha ivamise ukuntshontsha emakhaya ukuze yanelise izifiso zayo zokusebenzisa lezi zidakamizwa futhi abanye babo bagcine sebedlwengule izingane emphakathini. Konke lokhu inhlangano izama ngokusemandleni ukungenelela iphinde ilekelele labo abadinga usizo ezimweni ezifuze lezi,” kusho yena.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngale nhlangano noma uma uthanda ukuyixhasa shayela uMfu Ntshangase enombolweni ethi:082 666 0876.